Loza teny Andoharanofotsy Tapatapaka ary maty tsy tra-drano ilay mpitondra moto
Nisehoana lozam-pifamoivoizana nahatsiravina teo akaikin’ny fivarota-mofo “Point Chaud” Andoharanofotsy ny alin’ny zoma hifoha sabotsy 4 aogositra teo.
dia nivadibadika sy nikaperoperotra.Voalazan’ireo olona teny amin’ny manodidina fa nandeha mafy ity taksibrosy Sprinter ity ka izay no nahatonga ny loza. Naratra mafy avokoa ny mpandeha, ary tsy vitan’izay fa nisy 4 namoy ny ainy. Ny mpamily kosa tsy naninona fa salama tsara. Efa hitrangana lozam-pifamoivoizana foana eo amin’io toerana io raha ny nambaran’ny mponina ary amin’ny vanim-potoana akaikin’ny fetin’ny Paska toy izao no matetika hisian’izany. Ankoatra io, dia nisehoana lozam-pifamoivoizana ihany koa manamorina ny farihin'Anosy omaly tolakandro. Fiara tsy mataho-dalana marika “Ford” sy taksibe ao amin’ny zotra 138 no nifandona ka naharatrana olona miisa 9, ka valo no tao anatin’ilay fiara fitateram-bahoaka. Ny iray kosa no tao anatin'ilay fiara nandona, izay ny mpamily, ka samy nalefa teny amin'ny toeram-pitsaboana moa ireo niharan-doza ireo. Nihitsoka ny familiana ilay fiara tsy mataho-dàlana, ka nifatratra tany amin'ilay fiara nifanena taminy, raha ny fanazavan’ny mpamily.Na olana ara-teknika na fandehanana mafy foana no mahatonga ny ankamaroan’ny lozam-pifamoivoizana eto Madagasikara; fotoana kosa angamba izao hanamafisana sy hanatsarana ny fanaraha-maso.